Street Portrait ဓာတ်ပုံဆရာ Sal Patalano နှင့် အင်တာဗျူး - ONE DAILY MEDIA
Street Portrait ဓာတ်ပုံဆရာ Sal Patalano နှင့် အင်တာဗျူး
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ Sal Patalano သည် 2016 ခုနှစ်တွင် အသင်းအဖွဲ့လောကမှ အနားယူခဲ့ပြီး သူဟာ အထူးသဖြင့် Streets များမှ ပုံများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရန် ဝါသနာပါပြီး ဓာတ်ပုံပညာကို ဝါသနာပါသူဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းတစ်‌ေလျှာက်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့စကားမှာ “ကျွန်တော်က အခုလက်ရှိရဲ့ ချက်ချင်းလက်ငင်းပုံများကို နှစ်သက်ပါတယ်။ အရင်က မသိဖူးတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်ဆံရတာကို သဘောကျတယ်။ မျက်လုံးချင်းဆုံရတာကို သဘောကျတယ်။ သူစိမ်းတစ်ယောက်ဆီ လမ်းလျှောက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို သဘောကျတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။
— ပထမဆုံး ကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်ပေးပါဦး
အခွင့်အရေးရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်‌ေတာ်၏အမည်မှာ Sal Patalano ဖြစ်ပြီး 2016 ခုနှစ်တွင် ကော်ပိုရိတ်လောကမှ အနားယူခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်‌ေတာ်က Nashua၊ NH နှင့် Oldsmar၊ FL၊ USA တွင် နေထိုင်ပါတယ်။ အငြိမ်းစားယူပြီးကတည်းက လမ်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့လူတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ New Hampshire၊ Massachusetts၊ New York၊ North နဲ့ South Carolina နဲ့ Florida မှာရှိတဲ့ လူတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
— ကလေးဘဝအမှတ်တရအချို့ကိုလည်း ပြောပြပါဦး
ကျွန်‌တော့်ကို အီတလီနိုင်ငံ၊ Gaeta တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး 1958 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အမေက Grant ၏ Somerville၊ MA ရှိ စတိုးတွင် ပထမဆုံးကင်မရာကို ဝယ်ယူ ပေးခဲ့ပြီး $0.99 ကုန်ကျပါတယ်..အဒါက ပလတ်စတစ်၊ အဝါနုရောင် ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။ အစ်ကိုက အဲဒါကို boot camp မှာယူပြီး အဲဒီကင်မရာနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ အဖြူအမည်း ဓာတ်ပုံတွေကို ပို့ပေးတယ်။
— ဓာတ်ပုံရိုက်တာကို ဘယ်ချိန်လောက်ကစလုပ်ခဲ့ပြီး ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် နှစ်သက်သဘောကျလာခဲ့တာလဲ ??
1981 ခုနှစ်လောက်က စပြီး ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောက် မင်္ဂလာဆောင်မှာ ရိုက်ကူးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဓာတ်ပုံပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမသိဘဲ ရပ်ကွက်စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ မိနစ်တိုင်း ကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။ ဓာတ်ပုံပညာ ရှာတွေ့နိုင်တဲ့ စာအုပ်တိုင်းကို ဖတ်ဖူးပြီးသားပါ။ နောက်တော့ ယုံကြည်မှု လုံလုံလောက်လောက်ရတဲ့အခါ သတို့သမီးတစ်ယောက်ဆီက မင်္ဂလာ ဆောင်အယ်လ်ဘမ်ကို ငှားပြီး သူ့အယ်လ်ဘမ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြေငြာပြီး သူ့မင်္ဂလာဆောင်ကို ရိုက်ပေးခဲ့တာလို့ လိမ်ညာခဲ့ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။တစ်ခါမှ မရိုက်ဖူးပဲ မင်္ဂလာပွဲ 10 ပွဲ booking ရခဲ့ပါတယ်။ ၁၅ နှစ်လောက်ကြာပြီး‌ နောက်မှာ နေမကောင်းတဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ကြောင့် စွန့်လွှတ်လိုက်ပါတယ် ။ 25 နှစ်လောက်ကြာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး DSLR ကို ဝယ်လိုက်တယ်။ နည်းနည်းကြာတော့ လမ်းပေါ်မှာ စရိုက်ပြီး သဘောကျသွားတာပါပဲ။
— ဒီလို လမ်းတလျှောက် street ပုံတွေရိုက်ရတာက သင့်ကို ဘာတွေထူးခြားခံစား‌ရစေလဲ??
အဲ့ အခိုက်အတန့်ကို သဘောကျတယ်။ အရင်က မသိဖူးတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်ဆံရတာကို သဘောကျတယ်။ မျက်လုံးချင်းဆုံရတာကို သဘောကျတယ်။ သူစိမ်းတစ်ယောက်ဆီ လမ်းလျှောက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို သဘောကျတယ်။ ကနေဒါဓာတ်ပုံသတင်းထောက် Ted Grant က “အရောင်စုံတဲ့လူတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်တာဖြစ်ပြီး လူတွေကို အဖြူအမည်းနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်တာ။” လို့ဆိုပါတယ်ယ ကျွန်တော့် ရည်မှန်းချက်က လူတွေရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်တွေကို ဖမ်းဆုပ်ဖို့ပါ။ ထို့ကြောင့် ပုံများကို အဖြူအမည်းအဖြစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် ပြောင်းပါတယ်။
— ဓာတ်ပုံထွက်ရိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအရာတွေကို အဓိကရှာဖွေဖြစ်လဲ ?
လမ်းမတွေပေါ်မှာ လျှောက်သွားတဲ့အခါ မျက်နှာပေါင်းတစ်ထောင်ကို တွေ့နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့မျက်နှာကို မြင်လိုက်ရတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရမယ်ဆိုတာ သိတယ်။ အဲဒီ့လူ တွေကို ပြုံးပြဖို့ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်မယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံဖို့ လက်ခံလာလောက်တဲ့ထိ အဲဒီလူကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် စကားစမြည်ပြောကြည့်ပါတယ်။ သူတို့ဆီပုံ များပြန်ပို့ပေးဖို့ အမြဲကမ်းလှမ်းကြပြီး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အမြဲပြောလေ့ရှိပါတယ်။
— သင်ပုံတွေဆီကနေ လူတွေကိုဘာတွေရရှိသွားစေချင်လဲ ??
အပြင်မှာကြည့်ရတာ ကွဲပြားပေမယ့် အတွင်းပိုင်းမှာတော့ အတူတူပါပဲ ဆိုတဲ့အသိလေးပါ
— သင့် ဓာတ်ပုံပညာရှင် ဘဝရဲ့ဂုဏ်အယူရဆုံးအချိန်က ဘယ်အချိန်ဖြစ်မလဲ ??
2019 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ Clearwater, FL ရှိ Indoor Artwalk တွင် အနုပညာလက်ရာပြသရန် ရွေးချယ်ခံရသော အနုပညာရှင် 27 ဦးထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ချိန်ပါပဲ။ ပထမနေရာကိုရခဲ့တဲ့အထိကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ရလဒ်အနေနဲ့ Carnegie Gallery မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့အနုပညာတွေကို ပြသခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါက ဂုဏ်ယူစရာအခိုက်အတန့်ဖြစ်ပေမဲ့ ဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့အနုပညာပြပွဲအတွင်း လူတစ်ဦးတစ်ယောက်စီတိုင်း မတ်တပ်ရပ်ပြီး ပြသထားတဲ့ ကျွန်တော့်ပုံတွေကို စိုက်ကြည့်နေပြီး သူငိုပါတော့တယ်…အဲဒါက အခုအချိန်အထိ ဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံး အခိုက်အတန့်ပါပဲ။
–ဓာတ်ပုံပညာကို နှစ်များစွာ လိုက်နာသင်ယူခဲ့တာက နေ သင်ရရှိခဲ့တာ ဘာတွေလဲ ?
သင်ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြစ်ပါစေ စစ်မှန်ပါစေ ၊ စမ်းသပ်ရန်မကြောက်ပါနဲ့။ ရှေ့ဆက်သွားနေသော်လည်း အတိတ်ကို သင်ခန်းစာယူတတ်ရန် တို့ပါ။
–သင့်အတွက် ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ ??
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတွင် ပါရှိရမည့်အချက်မှာ-လူသားဆန်မှုပင်ဖြစ်သည်။ – Robert Frank
— ဘယ်ဓာတ်ပုံဆရာတွေက သင့်ကို စိတ်အားတက်ကြွစေသလဲ??
အလွန်များပြားပါတယ် စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့ တချို့က Ansel Adams ၊ Minor White ၊ Vivian Maier နှင့် Sebastiao Salgado တို့ပါပဲ။ပြောရမယ်ဆို စာမျက်နှာတစ်ခုလုံးပြည့်သွားလိမ့်မယ်
–ဘယ်ကင်မရာနဲ့ မှန်ဘီလူးတွေကို အသုံးများလဲ ??
လွန်ခဲ့သည့် လေးနှစ်တာကာလအတွင်း Fujifilm ကိုယ်ထည်နှင့် မှန်ဘီလူးများဖြင့် ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ အရင်ကတော့ Nikon ပါ။
— အားလပ်ချိန်တွေ ဘာလုပ်ဖြစ်လဲ ??
— ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ပုဒ်က ဘာဖြစ်မလဲ ?
လူတစ်ယောက် ပေးနိုင်တဲ့ အကြီးမားဆုံး လက်ဆောင်ကတော့ ဗဟုသုတပါပဲ
— ဓာတ်ပုံပညာအပြင် အခြားဝါသနာနှင့် စိတ်ဝင်စားတာ ရှိသေးလား ?
ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော့်မှာ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ် ( instrument rated pilot ) ရှိပေမယ့် အခုတော့ ကျွန်တော် ဆိုင်ကယ် စီးပါတယ်။
— တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန် အခွင့်အရေးကို ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခြားဘာပြောချင်ပါသေးလဲ ??
ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကို နှစ်သက် သင်ယူပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က အဖြစ်အပျက်တွေကို ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးက ဓာတ်ပုံဆရာ